स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – १५ (रावणले प्राप्त गर्यो ‘माता पार्वती’) - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ११, २०७६ समय: २०:१२:२०
हे अगस्त्य मुनि ! मृगका सिङको माझको टुक्रा गोकर्णमा स्थापना भयो । तहाँउप्रान्त नैऋत्य कोणको लङ्काबाट दश मुख भएको राजा रावण नित्य गोकर्णमा आई महादेवका चरणमा दण्डवत् गरी नाचगान गरी, नगरा, डमरु आदि बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो । केहीदिनपछि एकदिन महादेव विष, भाङ, धतुरो र गाँजा खाई अचेत भएर रहेका बखतमा सधैं झैं रावण आई पुगेर दण्डवत् गरी मृदङ्ग बजाएर नाचगान गर्न लाग्यो । यो देखेर भगवान् आषुतोष प्रसन्न हुनुभई ‘हे दशग्रीव रावण ! जे इच्छा छ त्यही वर माग ‘ भन्नुभयो । रावणले हात जोडी ‘हजुरका कृपाले मलाई सबैथोक परिपूर्ण छ । म के मागुँ ?’ भनी बिन्ती गर्दा महादेवले ‘एकथोक नमागी सुख पाउँदैनस्, माग्नैपर्छ ‘ भनी आज्ञा भयो । महादेवबाट जब दाहोर्याएर वर माग भन्ने आज्ञा भएथ्यो रावणका मनमा सकल लक्षणले युक्त भएकी महादेवका काखमा बसेकी पार्वतीलाई नै मागुँ भन्ने विचार उब्ज्यो । अनि ‘अरुथोक सबै कुरा त मसँग छ । हे ईश्वर ! वरदान दिने नै हजुरबाट इच्छा भएमा हजुरका काखमा बसेकी पार्वती मलाई बक्सियोस्’ भनी माग्यो ।
रावणका यी कुरा सुनी महादेवले ‘लैजा’ भनी पार्वती दिनुभयो । तब रावणले जगन्माता पार्वतीलाई बोकी महादेवसित विदा भई नैऋत्य दिशातिर लम्क्यो । उतिबेलै यो कुरा वैकुण्ठमा विष्णुले थाहा पाई ‘ओहो ! यो के विपरीत र अनर्थ हुन आँट्यो ?’ भन्दै तत्काल वायुको वेगभन्दा पनि छिटो आई आफ्ना मायाले मोहिनी रूप धारण गरी रावणका सामु गई सोध्नुभयो ‘हे महापुरुष ! तपाईं को हुनुहुन्छ ? कहाँबाट आउनुभएको ? तपाईंले पिठ्युँमा बोकेर ल्याएकी स्त्री को हुन् ? किन यिनलाई ल्याउनुभएको ? अनि कता जान लाग्नुभएको हो ?’ यो सुनी रावणले भन्यो – ‘हे सुन्दरी ! मलाई लङ्काका राजा रावण भनी जान । मैले कैलाशपति महादेवको तपस्या गरेको थिएँ । जसबाट सन्तुष्ट भएर वहाँले नै आफ्नी स्त्री पार्वती मलाई दिएर पठाउनुभयो र यिनलाई बोकी आफ्नो देश लङ्कातिर जाँदैछु ।’ रावणका यी कुरा सुनी मोहिनीरूपी विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे लङ्काधिपति दशग्रीव रावण ! के यिनैलाई तिमीले पार्वती ठानी ल्यायौ ? त्यत्रो लङ्केश भएर पनि तिमीलाई लाज लाग्दैन ? महादेवका मायाद्वारा रचिएकी नारीलाई तिमीजस्तो पराक्रमी राजाले बुइँमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान् ? लौ यी ता पार्वती होइनन् । महादेवले तिमीलाई छल्नु छलेछन् । तिमीलाई साँच्चिक्कै पार्वती नै मागेर लैजाने इच्छा छ भने पार्वती पाइने ठाउँ समेत मलाई थाहा छ । सो बताउँछु सुन ‘महादेवको आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चिक्कैकी पार्वतीलाई लुकाएर राखेका छन् । तिनैलाई मागेर लैजाऊ ।’ मोहिनीरूपी विष्णुले भनेका यस्ता अनेक कुरा सुनी रावणले पत्यायो र पार्वतीलाई त्यहीं छोडेर आफू फर्की फेरि गोकर्णमा गयो ।
महादेव पनि एकदिन पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवरमा गई राजहंस भएर जलक्रीडा गरिहनु भएको थियो । त्यसै समयमा अन्तःपुर नाम भएका नगरमा बसेका जालन्धर आफ्नी स्त्री वृन्दासित हाँस, ख्याल र ठट्टा गर्दै साह्रै खुसी भएर हाँसिरहेका थिए । वृन्दा अत्यन्त पतिव्रता थिईन् । आफ्ना पतिलाई त्यसरी हाँसेको देखेर उनीले ‘हे स्वामी ! किन हाँस्नुभयो ?’ भनी बिन्ती गरिन् । यो सुनी जालन्धरले भन्यो – ‘हे प्रिये ! हाँसेको कारण के भने, तिमीजस्ती राम्री स्वास्नी हुने मबाहेक अरु को होला ? यो सम्झेर म हाँसेको हुँ ।’ यो सुनी वृन्दाले भनिन् – ‘हे स्वामी ! स्वास्नी राम्री छे भन्दैमा हाँस्नु उचित होइन । यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । राम्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहुन्छ होला ? ती मभन्दा कता हो कता राम्री छिन् ।’ यो कुरा सुनेर ‘हे प्रिये ! तिमीले भनेको साँच्चिकै हो भने म ती पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु’ भनी मायाद्वारा महादेवको रूप लिई जालन्धर कैलाशमा जाँदा भए । मानसरोवरबाट जलक्रीडा गरी तृप्त हुनुभएका महादेव आइपुग्नु भयो भन्ठानी पार्वतीले हत्तपत्त गरी सुनको कमण्डलु लिएर गोडा धोइदिन ढोकामा आउनुभयो । उनको सुन्दरता देख्नासाथ महादेवको रूप धारण गरी गएका जालन्धर भुइँमा लडेर मूर्छा भए ।
यो देखेर पार्वतीले ‘के उदेक भयो’ भनी ध्यानदृष्टिले हेर्दा भएभरको रहस्य बुझ्नुभयो । त्यसपछि नन्दी, भृङ्गी अदि द्वारपाललाई ‘अब यहाँ कोही आएछ भने भित्र जान नदिनू’ भनी आफू एकान्त ठाउँमा गई लुकेर विष्णुको आराधना गर्न लाग्नुभयो । यसप्रकारको आराधना गरेको थाहापाई चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गर्नुभएका गरुडवाहन भगवान् विष्णु तत्काल नै हावाभन्दा पनि चाँडो गरी ध्यानमा रहेकी पार्वती छेउ पुगेर ‘हे पार्वती ! मेरो किन आराधना गर्न लाग्नुभयो ?’ भनी सुध्याउनु भयो । विष्णुको प्रश्न सुनी पार्वतीले भन्नुभयो – ‘हे लक्ष्मीपते ! यसबखतमा भने महादेव मानसरोवरमा गएर राजहंस भई जलक्रीडा गरेर आनन्दमग्न हुनुहुन्छ । यो अवसर छोपी जालन्धरले मलाई छल्न भनी महादेवको भेष लिई आएछ ।’ जगन्माता पार्वतीबाट सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि क्रोधित भएका विष्णुले भन्नुभयो – ‘हे पार्वती माता ! दुष्ट जालन्धरले तपाईंप्रति त्यस्तो दुर्व्यवहार चिताई छल गर्न आएछ । अब म पनि गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको सत्यलाई निश्चय नै डगाई आउँछु । महादेवको समेत खोजी गरी वहाँ पठाइदिन्छु ।’ यति भनी पार्वतीसित विदा भई विष्णु गरुडमा सवार भएर बडो वेगसित मानसरोवर जानुभयो । इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याः व्रतकथायां विष्णु-मानसरोवर-गमनं नाम षोडशोऽध्यायः ।।